Aeroflot maliteghachiri ụgbọ elu mgbe niile na Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan na South Korea
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Aeroflot maliteghachiri ụgbọ elu mgbe niile na Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan na South Korea
Airlines • Aviation • Akụkọ Belarus • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • Akụkọ Kyrgyzstan • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Transportation • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye na-ebu ọkọlọtọ Russia, Aeroflot, na-ekwuwapụta na ọrụ mba ofesi n'etiti Moscow na Kyrgyzstan (Bishkek), Belarus (Minsk) na Kazakhstan (Nur-Sultan) ga-amaliteghachi n'izu na-abịa. Gachi ọrụ n'etiti Moscow na South Korea (Seoul) ga-amaliteghachi na 1 October.
Gbọ elu maka isi obodo Kyrgyz na-amalite na 23 Septemba. Lightgbọ elu SU1882 Moscow-Bishkek ga-arụ ọrụ otu ugboro kwa izu, na Wednesde, na ụgbọ elu nlọghachi SU1883 Bishkek-Moscow ga-arụ ọrụ na Fraịde.
Largbọ elu Belarus SU1842 Moscow-Minsk na SU1843 Minsk-Moscow ga-arụ ọrụ otu ugboro n'izu, na Satọde, malite na 26 Septemba.
Gbọ elu maka isi obodo Kazakh ga-amaliteghachi na 27 Septemba. Lightsgbọ elu SU1956 Moscow-Nur-Sultan na SU1957 Nur-Sultan-Moscow ga-arụ ọrụ otu ugboro n'izu, na Sọnde.
Aeroflot ga-efega na isi obodo South Korea otu ugboro n'izu a na Thursday (SU0250 Moscow-Seoul). Nlaghachi azụ, SU0251 Seoul-Moscow, ga-arụ ọrụ na Satọde.
Ka ụgbọ elu mba ofesi na-agbake, enwere ike idozi akara ụgbọ elu n'okporo ụzọ ndị a.